တရုတ် Fod လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ - /4disc ကို2disc ကိုအတူ Oversea installation ကိုအခမဲ့အလိုအလျောက်ပန်းချီစက်
စပျစ်ရည်ကို bootle ဦးထုပ်အဘို့အလိုအလျှောက်အတွင်းပိုင်းပန်းချီစက်
/4disc ကို2disc ကိုအတူ Oversea installation ကိုအခမဲ့အလိုအလျောက်ပန်းချီစက်
အခြေအနေ: နယူးအမျိုးအစား: Coating ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအလွှာ: သံမဏိ Coating: မူလအစ၏ပန်းချီ Place: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ် (ပြည်မကြီး), ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: FOD မော်ဒယ်အရေအတွက်: F813AM005 ဗို့အား: 220V ပါဝါ (W): 600W Dimension (L ကို * W * H ကို): (W) 1500mmx (ဃ) 1200mmX (H) 1800mm အလေးချိန်: 320KG လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး: အီး ISO9001 အာမခံ: ပေး 1 နှစ်ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု: ရေခြားမြေခြားအဘို့အသုံးပြုဝန်ဆောင်မှုစက်ပစ္စည်းမှမရရှိနိုင်အင်ဂျင်နီယာများ: အော်တိုခရမ်းလွန် & မှ PU အပေါ်ယံပိုင်းစက် clolor: မီးခိုးရောင် / အပြာရောင် Dimention : (W) 1500m ...
Dimension (L ကို * W * H ကို):
(W) 1500mmx (ဃ) 1200mmX (H) 1800mm
အော်တိုခရမ်းလွန် & မှ PU အပေါ်ယံပိုင်း
မီးခိုးရောင် / အပြာရောင်
50 * 50 စတုရန်းပိုက်သံမဏိနှင့်သံမဏိ
PLC Touch ကိုမျက်နှာပြင်စနစ်က
hs Code ကို:
, ဓာတ်ပုံဘောင်ပန်းချီ, တီဗီဘောင်ပန်းချီပန်းချီကားကိုအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
1.2disc ကို /4disc ကိုအတူအလိုအလျောက်ပန်းချီစက် အကျဉ်းချုပ်
ကျနော်တို့ကိုဖုံးအုပ်ဝင်ရိုးအော်တိုမှုန်ရေမွှားပန်းချီစနစ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထူးပြု , XY ဝင်ရိုးပန်းချီ system ကိုလေပေါ်မှာပ, သုံး, လေးနှင့်ငါးင်ရိုးပန်းချီ system ကိုလေပေါ်မှာပတစ်ခုတည်းဝင်ရိုးအပြန်အလှန်မှုန်ရေမွှားပန်းချီစနစ်။ အဆိုပါနည်းပညာကိုကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ကစားစရာ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, လေဟာနယ်များတွင်လည်းကောင်း, သစ်သားတံခါးကို panel က, မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်လျှောက်ထားသည်။
2 .2disc ကို /4disc ကိုအတူအလိုအလျောက်ပန်းချီစက် ပင်မအားသာချက်
servo အပြန်အလှန်နဲ့ R, T နှင့် Z ကိုဝင်ရိုး၏အခြေခံပေါ်မှာဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆိုပါဝင်ရိုးမှုန်ရေမွှားပန်းချီစနစ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်မှုန်ရေမွှားအရည်, Atom, ထောင့်နှင့်အကွာအဝေးထုတ်ကုန်နှုန်းအဖြစ်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ညှိသည်တည်ငြိမ်ပြီးမျှတတဲ့ပန်းချီမျက်နှာပြင်ကုသမှုကိုထောက်ပံ့ပေး,
ဒါဟာလွယ်လွယ်ကူကူတဦးတည်းအလုပ်သမားများက operated နိုင်ပါတယ်နှင့်ပက်ဖြန်း parameters တွေကိုအစာရှောင်ဈေးကွက်ထဲမှာကတည်းကပူလူကြိုက်များခဲ့ပန်းချီပစ္စည်းကိရိယာများကိုလေပေါ်မှာပ PLC မှတ်ဉာဏ်ကဒ် .Our ဝင်ရိုး၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာခေတ်သစ်ကုမ္ပဏီအများကြီးအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ချွေကူညီပေးသည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးပွားစေပါသည်။
3.2 disc ကို /4disc ကိုအတူအလိုအလျောက်ပန်းချီစက် T က echnical Parameter
ထားခုနှစ်တွင် 1, 110V / 120v / 127 / 220V / 240V / 380v / 415 / 440v, 50HZ / 60HZ
2, Output Power က 600W
3, မက်စ်မှုတ်လိမ်းဧရိယာ မက်စ် dia.50mm
4 မရှိပါ။ ဂွန်ကိုလေပေါ်မှာပ 1-2 PCs
5, မက်စ် No.of လုပ်ငန်းခွင်အပိုင်းအစ 4-120PCS
6, မြန်နှုန်း (ချိန်ညှိ)
7, Spay အပေါ်ယံပိုင်းအမျိုးအစား5ဝင်ရိုးပန်းချီစက် servo system ကို reciprocating
8, Control Panel ထဲက PLC ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
9, အရွယ်အစား (L ကို * W * H ကို) 1500mm * 1200mm * 1800mm
10, ပင်မပစ္စည်း သံမဏိ & သံမဏိ
11, X ကို * Y ကို * Z ကိုခရီးသွားဧရိယာ 850 (က X) * 850 (က Y) * 300 (Z)
12, ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာ လက်ပ်တော့, Display, LCD TV, ဆဲလ်ဖုန်း, MP3 Button လေး, Desk ကွန်ပျူတာ Keyboard ကိုအိတ်ဆောင် hard drive ကို, ပလတ်စတစ်ဘောလုံး, မော်တော်ကားအပိုပစ္စည်း, ဓာတ်ပုံဘောင်, Tablet ကိုကွန်ပျူတာ pad ပါ
4.2disc ကို /4disc ကိုအတူအလိုအလျောက်ပန်းချီစက် ရုပ်ပုံပြရန်
5. မြန်တခြေလှမ်း Pack & ပေးပို့
10 ရက်ဖောက်သည်ထားရှိ oder ကတည်းကစက် disptach ။
အင်ဂျင်နီယာလုပ်သားများနောက်ဆုံးစာချုပ်ဒီဇိုင်းဆွဲအပေါ်အခြေခံပြီးဖောက်သည်ရဲ့စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ် 20days installation နဲ့ 5days စေရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကြင်နာစွာရေခြားမြေခြားတပ်ဆင်ဘို့သတိပြုပါ,
7. ကို Maintenance အာမခံ :
တစ်နှစ်အာမခံစက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်၏အခြေအနေအပေါ်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ပျက်စီးနေသောကုန်ပစ္စည်းများ၏ဆိုးအရည်အသွေးမရှိစေရန်လျှင်ပျက်စီးအစိတ်အပိုင်းများကိုအခမဲ့မှာလဲလှယ်နိုင်အာမခံ၏ကာလအတွင်း, ပျက်ဆီးနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်သွားဖို့လိုအပ်ပါသည်
8. ၏နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ မှုန်ရေမွှားပန်းချီစက် reciprocating ငါးခုဝင်ရိုးတန်း
နောက်တစ်ခု: Nipper စတစ်ကာများအတွက်ပူအရည်ပျော်ကော်ထိုးတန်ဆာစက်
Oversea installation ကိုအခမဲ့ငါးခုဝင်ရိုးတန်း reciprocati ...
ကားတစ်စီးဆက်စပ်ပစ္စည်း fpr5ဝင်ရိုးတန်းရေမှုံရေမွှားပန်းချီစက်
ca ကိုအဘို့အမှုန်ရေမွှားပန်းချီလိုင်း reciprocating5ဝင်ရိုးတန်း ...